Donkey Me: Sarimihetsika mahazatra Donkey Kong | Avy amin'ny Linux
Donkey Me: Sarimihetsika mahazatra Donkey Kong
Fotoana kely lasa izay dia niresaka momba izany aho Donkey Me: Mpanafika ny Vata very, kinova an'ny kilasika boriky Kong de Nintendo miaraka amin'ny sary aingam-panahy avy amin'ny sarimihetsika Indiana Jones voalohany.
Donkey Me dia nahita ny mazava vao tsy ela akory izay izay tsy hoe misy ilay dikanteny misy hevitra fotsiny, fa misy koa lohahevitra maro hafa aingam-panahy avy amin'ny sarimihetsika kilasika hafa, noforonin'olon-kafa, anisan'izany ny Locomalito, Grizor87 (izay efa noresahiko teo aloha Fandrika Verminian, Damn Castilla, sns.).
Anisan'ireo sarimihetsika hitantsika, ankoatry ny hafa:
Ny marina dia famintinana sarimihetsika tsara izy io, izay miantoka ny fahafinaretana mandritra ny ora maro, indrindra ireo izay niaina tamin'izany fotoana izany ary nilalao ny Donkey Kong tany am-boalohany.
Avelako ianao miaraka amin'ny screencast milalao lohahevitra maromaro. Manantena aho fa tianao izany:
Raha mpampiasa ianao Archlinux na derivatives dia azonao atao ny mametraka ny lalao amin'ny alàlan'ny fametrahana ny fonosana ampondra-me avy amin'ny AUR
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Avy amin'ny Linux » GNU / Linux » Donkey Me: Sarimihetsika mahazatra Donkey Kong
Tena tsara. Manantena aho fa afaka ambaratonga amin'ity lalao ity (amin'ny Mari0 dia aretin'andoha basy portal).
Milaza aminao aho fa efa nanandrana azy io taloha.
Isaky ny mihatsara ny sehatra indie ary tiako izany, ary raha miverina Retro dia tsy holazaiko anao akory ^^
Marina izany. Ary koa, efa te hilalao ny The Stanley Parable amin'ny Linux aho (parody mécanika Portal tena tsara).
Mandra-pahoviana ny Screencast? Tsara raha ampiana amin'ny 10 minitra. Fromlinux.net 😀
Maherin'ny 5 minitra.
Lalao tena tsara 😀
Herim-po? 😀… manandrana maka tahaka ny troll taloha anay ve ianao? 😀
Ny tena Courage dia manana Gravatar. Tsy misy ity iray ity, ary toa zavatra tsy mitovy amin'ny fayer FayerWayer.
Ankoatr'izay, tsy hanana ny baolina hiverina eto aho
Eny, efa niseho tamin'ny tena avatar azy izy (ary toa mampiseho an'i Iceweasel ESR avy amin'ny Wheezy ny mpampiasa azy).
Bricocine Ale dia hoy izy:
Manome aretin'andoha ahy hamindra ambaratonga amin'ity lalao ity, tsy fantatro raha mahatsiravina aho amin'ny filalaovana na inona, fa tamin'ny Mario kosa dia afaka nandroso bebe kokoa noho ity lalao ity aho.
Valiny tamin'i Ale de Bricocine
Donkey Kong dia mikorontana, azoko atao ny manisa amin'ny rantsan-tànako hoe impiry aho no nahatratra ny ambaratonga fahatelo, ary ny fahefatra, fofona, in-1 na in-2.
Fanontaniana: fidirana voafetra ao amin'ny tamba-jotra FromLinux ho an'ny Tor?